Mayelana NATHI - I-ELITES (Nanjing) International Supply Chain Management Co, Ltd.
Yezolimo Imishini Belt
Yezolimo Imishini Belt ngaphandle kwamazinyo
ibhande lesikhathi esizenzakalelayo
I-Automobile brake film / ulwelwesi lwe-brake diaphragm
yezimoto v ibhande elihlonyiwe
ibhande lemoto: kia hyundai fan belt
ibhande lemoto: ibhande le-generator
I-Cogged V Belt
I-Cogged V Belt Amazinyo Amabhande
ibhande lesikhathi sezimboni
umkhakha v ibhande
ibhande le-poly v
Renault isikhathi ibhande kit
injoloba / pu ibhande lezimboni
iraba ibhande lezimboni ibhande elisindayo
ibhande le-poly v elikhethekile
isikhathi ibhande kit
Isongelwe i-B Belt
I-Ningbo Ramelman Transmission Technology Co, LTD. yasungulwa ngo-2010 eZhejiang, empumalanga yeChina, ukubhekana nesidingo esikhulayo sabathengi bezimoto zangemva komakethe. Singabantu ibhizinisi elihlose ukuthekelisa ngemisebenzi yokukhiqiza neyokuthengisa. UNingbo Ramelman uyihhovisi legatsha laseHualong Transmission Belt Co., Ltd, elasungulwa ngo-2002 eliseZhengzhou. Isitshalo sefektri sithatha indawo engamamitha skwele ayi-15,000, neqembu elizinikele lamalungu weqembu lokukhiqiza, ukuklama nokuthengisa.
UNingbo Ramelman, oyinhlanganisela yokukhiqiza nokuhweba, akasebenzeli abathengi abanolwazi kuphela, kepha futhi nabachwepheshe abanikezwe umsebenzi wokuthenga ivolumu ephezulu okokuqala ngqa. Sisebenzisa izindlela zokuphatha zesimanje kanye nezindlela zokukhiqiza ezisezingeni eliphakeme kanye nezindlela zokulawula ikhwalithi ngenhloso "yokunikeza amakhasimende ethu amanje nabangase babe khona imikhiqizo esezingeni eliphakeme ngamanani aphansi kakhulu". Senze izixazululo zokonga izindleko nokonga isikhathi ezenziwe yithimba lethu elinolwazi futhi nelizinikele. Ngaphandle kwe-aftermarket yezimoto, imikhiqizo yethu nayo iyasebenza ekusetshenzisweni kwezimboni nezolimo. UNingbo Ramelman uthole isitifiketi se-ISO9001: 2008 ngo-2014. Ithimba lethu lizoqhubeka nokwenza ukutholwa kube lula kubo bonke abathengi baphesheya kwezilwandle.
Amashumi eminyaka weqembu le-Ningbo Ramelman lokuthumela ulwazi nokuzivumelanisa nezimo kwethu njenge-combo yokukhiqiza nokuhweba kwakusho ukuthi, singanikela ngemikhiqizo ehlukahlukene (yonke iqinisekiswe yi-CE), evela ku-Auto Timing Belt, i-Ribbed V Belt, i-Raw-edged V B Belt, Izithuthi Isikhathi seBelt, i-Industrial Belt, ibhande lezolimo, ku-Variable Speed ​​Belt. Inkampani yethu ibuye igxile ekunikezelweni kwezihlungi ezahlukahlukene, amabombo, ama-pulleys, i-brake pad, ama-spark plugs, amakhoyili we-Ignition, uwoyela nezinye eziningi. Imikhiqizo yethu yemakethe yezimoto ithengiswa emhlabeni jikelele, kufaka phakathi iMelika, Australia, Canada, Europe, Korea kanye nase Middle East njll.
Ikheli:68 East Ring Road, Yuelin Street, Fenghua District, Ningbo Idolobha, Zhejiang, China